दु:खद खबर: कार दु*र्घटना मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टरको नि*धन
काठमाडौं । डरलाग्दो सडक दु*र्घटनामा दुई जनाको ज्यान गएको छ । प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ केतन खुर्जेकरसहित दुईजनाको मृ*त्यु भएको हो । आइतबार राति मुम्बई पुणे राजमार्गमा भएको एउटा भयानक सडक दु*र्घटनामा दुईजना गम्भीर घाइते भएका छन् । भनिन्छ कि डाक्टरहरूले सडकमा पंचर कारको पाङग्रा परिवर्तन गर्दै थिए । यस बीच, बस पछाडिबाट आएको बसले जोडदार ठक्कर मा*र्यो । चार जना कारमा सवार थिए ।
दुर्घटना पछि राजमार्ग लामो समयको लागि जाम भयो । तलेगांव दाभाडेका इन्स्पेक्टर किशोर म्हस्वाडेले सोमबार बिहान १०ः३० बजे सुमातेन गाउँ नजिक दुर्घटना भएको बताउनुभयो । दु*र्घटनामा ४४ वर्षीय केतन खुर्जेकर र दुई अन्य आर्थोपेडिक सर्जनहरू पुणेबाट एउटा ट्याक्सीमा मुम्बई जाँदै थिए । जब क्याब गाउँमा आइपुग्यो, ड्राइभरले सडकको छेउमा गाडीलाई रोकेर त्यसको पाङग्रा बदल्न थालेका थिए । यस पछि, डाक्टरहरूले ड्राइभरलाई मद्दत गर्न थालेको बताइएको छ ।
डा. खुर्जेकर सचेती अस्पतालमा स्पाइन सर्जरी विभागका प्रमुख थिए । स्वर्ण पदक विजेता डा. खुर्जेकर जनताका एकदम प्यारा थिए । उनले ३,५०० जटिल सर्जरी गरेका थिए । घटना सुनियोजित हो वा होईन भनेर प्रहरीले घटनाबारे आवश्यक थप अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । जन बोली डट कम बाट साभार ।